Shaandheeyey sawirradii ugu horreeyey ee Meizu 15 Plus | Androidsis
Meizu waa summad si joogto ah ugu sii socota suuqa. Sannadkan 2018 cusboonaysiinta dhamaadka-sare ee sumadda Shiinaha ayaa la filayaa. In kasta oo illaa iyo hadda macluumaad yar laga ogaa aaladaha ay sumaddu diyaarinaysay. Hadda, Waxaan helnaa xogta ugu horreysa ee Meizu 15 Plus. Qalab la filayo in la soo bandhigo guga.
Intaa waxaa dheer, sawirradii ugu horreeyay ee qalabkan horay ayaa loo sifeeyay. Kuwani waa qaar ka mid ah ereyo bixin oo naga tagaya fikrad aad u cad oo ku saabsan Meizu 15 Plus. Intaa waxaa dheer, dhowr nooc oo ku saabsan taleefanka ayaa sidoo kale la muujiyay. Maxaan ka filan karnaa taleefankan?
Waxa ugu horreeya ee ka dhex muuqda sawirrada ayaa ah Meizu waxay dooratay isbedel nashqadeed ee Meizu 15 Plus. Shirkaddu waxay ku biirtay isbeddelka shaashadaha aan loox lahayn. Marka dhamaadka-sare sidoo kale wuxuu yeelan doonaa mid. Sidan oo kale, mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee taleefannada nooca ayaa gebi ahaanba baaba'aya.
Telefoonada Meizu waxaa had iyo jeer lagu gartaa joogitaanka badhanka xaga hoose ee hore. Laakiin, meeshan 'Meizu 15 Plus' waxaad sharad ku dhigaysaa shaashad bilaa xayndaabyo leh 18: 9 saamiga. Marka ma jirto meel badhan oo kale ah. Waxa aan laga faalloon ayaa ah in qalabku soo bandhigi doono badhan farshaxan ah.
Qeybta dambe ee taleefankan waxaan heleynaa laba kamarad. Wax kale lagama faalloon kamaraddan. Laakiin, astaantu waxay la socotaa isbeddellada aan ku aragno heerka ugu sarreeya. Maaddaama waxa hadda jira ay taasi tahay haysato laba kamarad.
Ku saabsan inta ka hartay qeexitaanka Meizu 15 Plus wax aad u yar ayaa laga yaqaan. Waxaa la sheegay inay jiri doonto laba nooc oo taleefanka ah. Midkood oo leh 8 GB oo RAM ah iyo 256 GB oo keyd ah, oo leh a qiimaha 553 dollars. Halka sidoo kale ay jiri lahayd a nooca oo leh 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB kaydinta $ 474.
Laakiin labadan nooc midkoodna lama xaqiijin. Marka wali waa inaan sugnaa inyar oo faahfaahin dheeraad ah oo shaaca looga qaadayo meizu 15 Plus.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Meizu » Sawirradii ugu horreeyay ee Meizu 15 Plus waa la sifeeyey